09 | novembre | 2020 | InfoKmada
Accueil 2020 novembre 9
Archives quotidiennes: 9 novembre 2020
Arbre sacré : toerana manan-tantara ao Nosy Be
InfoKmada - 9 novembre 2020 0
Toerana isan'ny mahasarika mpizahantany ao Nosy Be ny "arbre sacré". Hazo iray izay misandrahaka amina velaran-tany 5 000m² ary efa 250 taona mahery ankehitriny. Toerana masina voahodidina lamba mena sy fotsy hanomezan-danja ireo fanahy ao anatiny. Araha avy hatrany ny mahakasika izay.
Bealanana : tanora miisa 42 nahavita fiofanana hanamboatra lalana
Miisa 42 ireo tanora nahazo fiofanana hamaky vato, hamaky sy hametaka Pavé ao Bealanana. Fiofanana izay nokarakarain’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak’asa sy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Afaka miasa avy hatrany ireo tanora ireo ary manana ny traikefa takiana amin’izany.
Ambohiponana – Manandona : toerana mahasarika mpizahatany maro
Anisan’ireo toerana mahasarika mpizahatany sy toerana mananan-tantara ao amin’ny faritra Vakinankaratra ny kaominina Manandona izay ahitana ny Rovan’i Ambohiponana sy ny riandrano Ambodiriana. Ny mahakasika io toerana io noharahinao anatin’ity fanadihadiana ity.
Rofia sy taretra gasy : mahavelona ankohonana maro
Azo hatao tsara ny manome lanja ny rofia sy ny taretra gasy amin'ny alalan'ny fanamboarana tapis na lafika haingon-trano any toamasina. Fianakaviana maro no mivelona amin’izany ary mahavelona tanteraka raha ny fanazavana.
Kabesoron’i Ampanjaka TOERA : haverina eto Madagasikara
Isan’ny fanamby napetraky ny filohan’ny repoblikan’i Madagasikara nandritra ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny Rovan’i Madagasikra sy ny lapan’i Manjakamiadana ny hamerenana eto an-tanindrazana ny kabeson’i Ampanjaka TOERA avy any Menabe. Hemerin-kasina ny any an-toerana ny fiverenan’izany raha ny fanazavana.